Volavola amin'ny vahaolana PDF amin'ny alàlan'ny Formstack sy Webmerge
Ataovy mandeha automatique ny fizotranao famoronana PDF amin'ny WebMerge
Alarobia 23 Janoary 2013 Zoma, Febroary 27, 2015 Douglas Karr
Nitsidika ny iray amin'ireo mpanohana ny teknolojia anay aho '(Formstack) mpanjifa omaly hifanakalo hevitra momba ny fampifangaroana be dia be izay niasan'izy ireo. Ny nahavariana ahy dia ny tena nahavitan'izy ireo ny ankamaroan'ny fampidirana na dia tsy nanana loharanom-pahalalana ho an'ny mpiasa aza izy ireo.
Ny ampahany lehibe amin'ny serivisin'izy ireo dia ny fananana endrika nofenoin'ireo mpiasa am-barotra, ny vinavinany na ny mpanjifa. Ny valiny dia PDF manokana izay tsy maintsy nofenoina tsara ary natolotra elektronika tamin'ireo orinasan'izy ireo. Vitan'izy ireo tamina fampiasana tsy nisy ezaka izany Formstack sy WebMerge. Teo anelanelan'nyFormstack interface tsara ho an'ny mpampiasa amin'ny famolavolana ny questionnaire… ary ny fahafahan'ny WebMerge hametraka an-tsarintany izany data izany ary hamoaka PDF… niasa tsy nisy kilema ilay rafitra.
miarakaFormstack Ny fampidirana WebMerge dia azonao atao ny mamorona antontan-taratasy PDF avy amin'ny fandefasana form, mandefa fampandrenesana mailaka azo ekena, ary mandefa mailaka ho azy ireo antontan-taratasy PDF vita. Ity dia fampidirana matanjaka tokoa izay ahafahan'ny orinasa mamorona tapakila, fifanarahana, fifanarahana asa, mora foana… ny anaranao!
Ataovy mandeha ho azy ny fizotran'ny famoronana rakitrao mamorona antontan-taratasy PDF avy amin'ny fanoloran-taratasinao. Haingana sy mora ny fanomanana.
Tags: fanolorana endrikaendrika to pdftenyformstackTechwebmerge
TinyLetter: Tsy misy taratasy momba ny mailaka mailaka
Ahoana ny fomba fampiasana ny fanarahana ny fiovam-po Facebook
Jan 24, 2013 ao amin'ny 5: 18 AM
Tena miasa "tsy misy dikany" tokoa ve ny rafitra toy izao araka ny nanoratanao?
Jan 24, 2013 ao amin'ny 9: 06 AM
Eny, mijoro amin'ny fampiasako ilay teny aho. 🙂